Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » LGBTQ » I-LGBTQ + iinkokheli zokhenketho zihlanganisene eAtlanta 'ngokudibana kosapho'
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • Education • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Amalungelo abantu • LGBTQ • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Imitshato yothando • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Ingqungquthela ye-IGLTA ye-37 ye-IGLTA yayiyimpumelelo enkulu, engaphezulu kwe-400 LGBTQ + kunye nabaqeqeshi abahamba kunye nabameleli bamazwe angama-27 behlangana e-Atlanta.
Kwakukho indawo yokuThenga / yokuThengisa, indawo yeentsuku ezininzi zemfundo, inkuthazo kunye nenethiwekhi, kunye ne-IGLTA Foundation fundraiser, uhambo.
Ubungqina bokugonywa ngokupheleleyo okanye uvavanyo olubi lwe-COVID-19 lwalufuneka ukuze wamkelwe kuyo yonke iminyhadala yendibano ye-IGLTA.
Ingqungquthela ye-IGLTA ye-37 ye-IGLTA yaba yimpumelelo enkulu, engaphezulu kwe-400 LGBTQ + kunye neengcali zokuhamba ezimanyeneyo ezimele amazwe angama-27 eza kunye Atlanta Indawo yokuThengisa yoMthengi / yoMthengisi, iintsuku ezininzi zemfundo, inkuthazo kunye nenethiwekhi, kunye ne-IGLTA Foundation fundraiser, uhambo.
Ubungqina bokugonywa ngokupheleleyo okanye uvavanyo olubi lwe-COVID-19 lwalufuneka ukwamkelwa kubo bonke IGLTA indibanon imicimbi kwi Atlanta, kwaye iziphumo yayikukubuyela ngokwamkelekileyo kwinqanaba elithile lesiqhelo kwabo babekho, ababelana ngamabali abo akhuthazayo okunyamezela ngobungcali, kunye neengcinga zabo ezinesibindi zokuyila, ukhuseleko kunye nokubandakanywa kwicandelo lezokhenketho le-LGBTQ.
UMongameli we-IGLTA / u-CEO uJohn Tanzella
Sisoloko sisithi IGLTA uthungelwano lwehlabathi luziva ngathi lusapho, kuba unxibelelwano kwishishini luye lube lolobuqu kule minyaka idlulileyo, utshilo uMongameli / u-CEO we-IGLTA uJohn Tanzella. “Kodwa ukudibana kwethu kwakubaluleke kakhulu emva kweenyanga ezili-18 sihlukene. Unokuluva uthando lwe-LGBTQ + kukhenketho kwiseshoni nganye, kwaye yomeleza zonke iintlanganiso zeshishini kwindawo leyo. Siyazingca ngokukhokela indlela ekwakhiweni kwakhona kweshishini lethu. ”
Phakathi kwezinto ezininzi ezibalaseleyo:
Itheko lokuvula kwi-Aquarium yaseGeorgia, apho iindwendwe zazihlala khona njengookrebe beminenga, imitha kunye neenqanawa zolwandle zatyibilika emva kwabo kwitanki eyi-6.3 yezigidi (iilitha ezingama-23.8 yezigidi).
IGLTA Foundation Think Tank eKing & Spalding ukuba iinkokeli ezimanyeneyo ezivela kuwo onke amacandelo eshishini lokhenketho kunye nemibutho ye-LGBTQ +; Ingxoxo igxile ekunqamlezweni kwe-LGBTQ + kwezokhenketho ngobulungisa ngokubanzi, iyantlukwano kunye namanyathelo okubandakanya, kunye nendlela yokubuyela njengomzi mveliso owomeleleyo nowamkela ngakumbi. Ingxelo yeseshoni iyeza.